Al-Shabaab oo qiratay ku xad-gudubka xaqa carruurta iyo askareyntooda
Yuusuf kabo-ku-tukade oo ka mid ah horjoogeyaasha sare ee ururka diinta islaamka ka been sheegay ee al-Shabaab ayaa qiray kuna faanay in ay carruurta u adeegsadaan ciidan ahaan iyo weerarrada ismiidaaminta ee ururku u geysto shacabka Soomaaliyeed.
Kabo-ku-tukade wuxuu qiray in ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab uu dagaal galiyo carruur aan weli qaan gaarin, wuxuuna ku faanay in canug kiisa ah oo aan gaarin uu ka dagaallamo dalka Kenya.
“Aniga wilkii aan dhalay anigoo Shabaab ah Keenya ayuu ka dagaallamaa, inta aanu dhalnay ayaa nagu filan. Kuligeenna waxaan leennahay afar xaas,” ayuu yiri kabo ku tukade.
Sidoo kale hoggaamiyahaan sare ee kooxda argagixisada ah ee al-Shabaab wuxuu haweenka Soomaaliyeed ku tilmaamay in ay la mid yihiin xayawaanka doorada.
Afar afar naagood ayaan leennahay, sida doorada ayey u dhalaan habeen iyo maalin ayaa ka mid ahaa hadallada uu Kabo-ku-tukade, hadalkaasoo sharaf darro ku ah haweenka Soomaaliyeed kana fog dhaqankeena.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu haweenka ku nool deegaannada uu weli ka arrimiyo u geystaa gabood-fallo waaweyn iyagoo maleeshiyaadka kooxda u dagaallamaan si khasab ah ugu guuriyaan hablaha aan qaan gaar aheyn isla markana aysan oggolaasho uga haysanin waaliddiintii dhashay.
Waxaa jiraan kumannaan carruur Soomaali ah oo ay al-Shabaab ku xareeyeen goobo qarsoodi ah kuwaasoo ehelladooda laga fara maroojiyay oonan la ogeyn goobaha ay ku sugan yihiin.
Xorriyo 2 Views : 280
Xorriyo 1 Views : 10642